Juventus oo bar-tilmaameed koowaad ka dhiganeysa Francisco Isco xagaaga soo aadan – Gool FM
Dajiye September 18, 2018
(Juventus) 18 Sab 2018. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu daboolka ka qaaday in kooxda Juventus ay bar-tilmaameed koowaad ka dhiganeyso Francisco Isco xagaaga soo aadan.
kooxda Juventus ayaa halkeeda kasii wadi doonta inay sameyso saxiixyada ciyaartoyda ugu fiican kubada cagta aduunka, kadib markii ay dhawaan kala soo saxiixatay Real Madrid Cristiano Ronaldo aduun dhan 100 million euros.
Bianconeri ayaa dagaal xoogan ugu jirta sida ay u rumeyn lahayd riyadeeda ku aadan inay ku guuleysato tartanka Champions League.
Sidaas daraadeed Juventus ayaa xiiseeneysa inay iska sii xoojiso khadkeeda dhexe, waxayna Isco u aragtaa mid ku haboon in uu xirto maaliyada Bianconeri, iyadoo qeybta hore kaga dhigtay liiska xidigaha ay dooneyso xili ciyaareedka soo aadan.
Isku dayga Juventus ayaan noqon doonin shaqo fudud, sababa la xiriira in Isco uu muhiim ka yahay qorshaha Julen Lopetegui ee kooxda Real Madrid, xili qandaraaskiisa uu dhacayo sanada 2022.